မောင်ဖုန်းမြင့်: 9/1/10 - 10/1/10
ရှိတ်ထား . . . သားကြီး
ရှိတ်ထား . .
ပျံဝဲနေတဲ့ လိပ်ပြာလေး မင်းအတွက်
ပညာရပ်အကြောင်း ဥာဏ်သစ်လောင်းပေးချင်တယ် ကွာ
ဖားဟာ ကေသရာဇာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်သလို
ဗူးသီး ခိုးမှုနဲ့တောင် အချုပ်ထဲ မဝင်ဘူးပဲနဲ့တော့
ပုစွန်ခေါင်းလေး စက်တပ်ပြီး မောင်းချင်သေးသတဲ့လား
အမှိုက်တွေ ကော်စားတော့မှာလား . . . ငါ့သား
ခလေးဆိုးကြီးလို နှုတ်ခမ်းဆူ ၊ ခြေဆောင့်
မာမီတွေ ၊ အန်တီတွေ လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးရင်
အဝှာပါ ကွေးနေအောင် .. ရှိတ်ထား
ရှိတ်ထား… သားကြီးရေ့ . . ရှိတ်ထား
ရှိတ်ထား ။ ။
Posted by phone myint at 9:46 PM2comments: Links to this post
ဝေါ . . . . . . ကနဲ သူသွန်ချလိုက်
တယ် အရိပ်မည်း ကြီးကန် ရေပြင်ပေါ်
ဖျောင်းလက် ခမောင်းတွေ ထတဲ့ခတ်ပြီး
L = E = D မီးလုံးက
ကြင်ကြင် နာနာ (ထို) ပန်းအိုး တို့အား နာ
ကျင်စွာနှုတ် ခွန်းဆက်စ ကားဆိုရင်း
ကားဘီးတစ်ဘီး လိုမြေသားကို နင်းကြိတ်ချေ
၍ ထွက် သွား ပုံမှား
ယွင်းခြင်း တစ်ခု မှန်သား
လို မှန်ကန် မြန်ဆန် ခြင်းတစ်ခုမရှိ တိ
ကျသောအ တိုင်းတာအ တိုင်းယက်လုပ်
အ ဆုံးအမဖြင့် ငြိမ်းအေးစေ လိုက်ပြီးမီး
တောက်များ ရုတ်ခြည်း ချုပ်ငြိမ်းပျောက်
အဆန်း တကြယ် လှပ တင့်တယ်
စွာ ။ ။
Posted by phone myint at 12:51 AM 1 comment: Links to this post
Posted by phone myint at 8:10 PM2comments: Links to this post
နိဂုံး အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည် ။
နိဒန်းမရှိ . . .
လေလွင့်သူ၏ အခြားဖက် မျက်နှာစာမှာ
အထီးကျန်ခြင်း တိမ်တိုက်ဖြစ်သည် ။
မိုးစက်များ ဝမ်းနည်းဖွယ် ခုန်ဆင်းလာကြသည် ။
ယုတ်ညံ့သော ညနေခင်း၏ အူသံသာဖြစ်သည် ။
အဓိပ္ပါယ်၏ ထပ်ဆင့် အဓိပ္ပါယ် ဆင့်ပွား အနက်ဖြင့်
သိမှုအရ အောက်ပါတို့ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
(A) ။ ။ ငုံးဆူလူမသိ (မြန်မာစကားပုံ)
(B) ။ ။ ကြက်ဆူပင် ဓရင်ထိုး
အမျိုးလုပ် ။ (ရှေးခတ်မြန်မာကဗျာ)
(C) ။ ။ သမိုင်းဦး ဘုံမြေခေတ်၌ လူသားယောကျာ်းများသည်။
နှစ်သက်ရာ လူသား အမျိုးသမီး၏ ဦးခေါင်းကို ရိုက်နှက်၍
အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သည် ။
အပြုံးသည် နှစ်ချိုက်စွာပြုံးသည် ။ ရောင်စုံပန်းပွင့်များ ။ ကြိုးစင် ။ ပါးစပ်ဖွာသော မိန်းမများ ။
သို့ . . . ဂျုးလိယက်ဖူးချစ် ။ ဟိုတယ် ။ မှန်ပြုတင်းမှ နေရောင်ခြည်။ အိုဗာစတေး လက်သည်းပွင့်များ။တယ်လီဖုံးမြည်သံ။ အနက်ရိုင်းဆုံးအမှောင် ။ သည်းကြိုးပြတ်ဖိနပ် . . ။
နိဒန်းပြန်စသည် . . . .
နိဂုံးသည် အဆုံးမဲ့ . . . .။
Posted by phone myint at 11:21 PM 1 comment: Links to this post
27. လေပြေ (DOI)
30. သိုးထိန်း (အန္တိမ)
pem s k o o l pdf p oet r y ser ies အမှတ် တစ် အောင်မြင်စွာဖြစ်မြောက်လာရန်
ကဗျာစာမူများကို မငြီးမငြူပေးပို့ခဲ့ကြသော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ/on-paper/online/နောင်တော်/ညီတော်
ကဗျာဆရာများ အားလုံးကို pemskool မှ ကျေးဇူးမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
Posted by phone myint at 7:23 PM 1 comment: Links to this post
အဲ့ဒီလို မြင့်မြတ်သန့်စင်တဲ့ “လေ” ကို
ဝမ်းဗိုက်ကြီး ဖောင်းကားထလာတဲ့ အထိ . . .ရှု
ပြီးရင် . . . မင်းပါးစုန့်မို့မို့ကြီးတွေ တုန်နေအောင်
ပြီးမှ . . ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မှုတ်ထုတ်
ဒီရေ . . . ဒီမြေမှာ
တခုတည်းသော အဖိုးတန် “လေ”
ကာလ ။ ဒေသ ။ ပယောဂ ။
အတ္တ ။ မာန ။ အနုသယ ကိလေသာ
အားရပါးရ . . . ရှု
အရောင်အမျိုးမျိုး ၊ ဝါဒအဖုံဖုံ
အရေပြားအရောင်တောင် မခွဲခြားနဲ့ . . . ရှု
ကွန်ဆားဗေးတစ် ။ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ် ။
လေဘာပါတီဝင်ဖြစ်နေတာ မေ့ထားပြီး . . . ရှု
အမ်ဘီအေ ။ ဒီလစ် ။ အခဲဒမစ်
အဲ့ဒါတွေခေါက်ထားပြီး . . . ရှု
မင်း ဦးဏှောက်တွေ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတဲ့အထိ . . . ရှု
မင်း ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားအောင် . . .ရှု
မင်း အသက်ဓါတ်နဲ့ အလေးအမြတ်ပြုပြီး . . .. ရှု
မင်းရဲ့ ကျန်ရှိသက်တမ်း အနည်းငယ်မျှသာ
မသေခင်အားရပါးရ ဝအောင် ရှုလိုက်စမ်း . . . .။ ။
Posted by phone myint at 9:39 PM3comments: Links to this post